Chishanu, January 8, 2021 Chishanu, January 8, 2021 Douglas Karr
Nguva Yokuverenga: 3 maminitsi Kana iwe uri agency kana kambani ine portfolio yemasaiti kana mapeji ayo iwe aunoda kugovana online, iwe ungangodaro wakapfuura kuburikidza nemarwadzo ekuyedza kutora yunifomu screenshots yeimwe neimwe yemasaiti. Mumwe wevatengi vatiri kushanda navo anovaka yakagadzirirwa Intranet mhinduro dzinogona kuitirwa mukati mukati memunyika yekambani. Intranets inobatsira zvinoshamisa kumakambani kutaurirana nhau dzekambani, kugovera ruzivo rwekushambadzira, kupa
Nguva Yokuverenga: 3 maminitsi Apple's June 2020 chiziviso chekuti IDFA ichave chinhu chekupinda-mukati chevatengi neSeptember iOS 14 kuburitswa kwakanzwa kunge rugi rakaburitswa kubva pasi peye 80 bhiriyoni indasitiri yekushambadzira, ichitumira vashambadziri mukutambudzika kuti vawane chinotevera chakanakisa chinhu. Izvozvi zvave pamusoro pemwedzi miviri, uye isu tichiri kukwenya misoro yedu. Nechangobva kudikanwa kudzoreredzwa kusvika muna 2021, isu seindasitiri tinoda kushandisa nguva ino zvinobudirira kuti tiwane mwero wegoridhe mutsva
Nguva Yokuverenga: <1 Mineti Ini ndangonyora nezve yangu yakadzoserwa rudo kudanana ne Twitter uye ndakagovana vaviri mashoma maturusi ekugadzirisa ako Twitter vateveri. Hechino chimwe chishandiso chakanaka chandichangowana! Riffle neCrowdRiff ndeye Chrome plug iyo inowedzera iyo Twitter dashibhodhi pane iyo inokubatsira iwe kuona uye kuongorora ruzivo pamushandisi weTwitter. Riffle anopa ruzivo kusanganisira chiitiko, kubatanidzwa kwenyaya, kunobva ma tweets pamwe nekutaura kwavo kwepamusoro uye hupfumi.